WeSing အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
5.40.2.612 for Android
ဒေါင်းလုပ် XAPK（58.5MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် WeSing - Sing Karaoke & Videoke Recorder
Wesing သည်လူကြိုက်များသောကာရာအိုကေသီဆိုသည့်အက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်သည်။ Wesing သည်သင့်ကိုသင်၏အကြိုက်ဆုံးသီချင်းများကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်စတိုင်ဖြင့်သီဆိုရန်, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြသရန်ကာရာအိုကေဗွီဒီယိုများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်နှင့်တေးဂီတမှတစ်ဆင့်မိတ်ဆွေဖွဲ့ရန်ခွင့်ပြုသည်။ သင်၏သီချင်းဆိုပါရမီကိုပြသရန်ကျွန်ုပ်တို့ဖွင့်နိုင်သည်။ ဒီနေ့ကနေသီချင်းဆိုကြည့်ရအောင်။
အနုပညာရှင်များသို့မဟုတ်ကာရာအိုကေပါတီအခန်းသို့ဆက်သွယ်ပါ။ အသံအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အမျိုးမျိုးသောဗွီဒီယိုစစ်ထုတ်စက်အမျိုးမျိုးကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်သင်၏ကာရာအိုကေအသံသွင်းခြင်းများကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်ပြီး ပို. ကြိုက်နှစ်သက်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင်ကျော်ကြားစေရန်ဂီတလှုပ်ရှားမှုအမျိုးမျိုးကိုလည်းသင်ပါ0င်နိုင်သည်။ ယနေ့ မှစ. Music ချစ်သူများသန်း 100 ကျော်နှင့်အတူဝေမျှရန်သင်၏ Karaoke ဗွီဒီယိုများကိုမှတ်တမ်းတင်ပါ။ 🎉
Karaoke & Karaoke song သီချင်းများ
- သင် POP သို့မဟုတ် Hip-Hop, R & B သို့မဟုတ် R & B သို့မဟုတ် ROS ROCK သို့မဟုတ် RAP သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်အရာမဆိုသင်ဤနေရာတွင်နောက်ဆုံးပေါ် hits ကိုသီဆိုနိုင်သည်။
Free Free Music Library သည်သင်၏အတွင်း၌အဆိုတော်များကိုဖော်ထုတ်ရန်အတွက်သင်၏သီချင်းကျွမ်းကျင်မှုကိုလေ့ကျင့်ရန်ကူညီသည်။ ပရိသတ်များနှင့်0င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်အသံအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ဗွီဒီယိုစစ်ထုတ်စက်များနှင့်အတူသင်၏ Karaaoke ဗီဒီယိုများနှင့်အတူ။
သူငယ်ချင်းများနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူ Duet ။
> 🌟 ktv ပါတီခန်း
တစ်ယောက်တည်း။ သီချင်းဆိုခြင်းကိုလည်းချစ်သောသူမိတ်ဆွေများကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့ရန် KTV ပါတီအခန်းသို့ဆက်သွယ်ပါ။
Interactive Music လှုပ်ရှားမှုများ
ငါတို့တေးဂီတချစ်သူများကိုကူညီရန်အမျိုးမျိုးသောဂီတလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်သည် ထင်ရှားသည်။ ဥပမာအားဖြင့် Duet စိန်ခေါ်မှုနှင့်ပါတီခန်း PK ။
- သင်ကိုယ်တိုင်ပြသရန်သို့မဟုတ်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအဆိုတော်များ (s) ကိုထောက်ပံ့ရန်သို့မဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်ကိုပြသရန်အတွက်အမျိုးမျိုးသောတေးဂီတလှုပ်ရှားမှုများကိုဆက်သွယ်ပါ။
Live streaming? ဟုတ်တယ်,
- သီချင်းဆိုခြင်းအပြင်အခြားအခွက်မဆို - သင်၏စွမ်းရည်များအားလုံးကိုပြသရန်သင်အသက်ရှင်နိုင်သည်။
- တေးဂီတချစ်သူများ၏ဘဝကိုသိလိုပါသလား။ သူတို့ကဒီမှာသူတို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဘဝကို Live-
B> ကန့်သတ်မထားပါ။ သင် - Miley Cyrus
သင်အကြောင်းပြချက် - Calum Scott
> ဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခု - Chainsmokers
Twitter: @ WesingApp
မေးခွန်းများရှိပါသလား။ [email protected]
ဘာအသစ်လဲ WeSing - Sing Karaoke & Videoke Recorder 5.40.2.612
【Hook Duet Updated】 Lyrics crop feature is avaliable, it‘s free to select any clip you love to sing now! Come and make your personalized hook duet!
WeSing Studio🔴#WeSing Sing Karaoke Free Videoke Recorder
HOW TO CONNECT WESING APP AND BM800 CONDENSER MIC TO V8 SOUND CARD: FOR IPHONE USER ONLY
WeSing🔴Sing Karaoke Free Videoke Recorder 🎼 #WeSing WeSing - ร้องคาราโอเกะ & บันทึกคาราโอเกะ
How to download we sing video to gallery ( tagalog tutorial)
Jena Fe Mangubat
WeSing - Sing Karaoke & Free Videoke Recorder 5.38.5.598
WeSing - Sing Karaoke & Free Videoke Recorder 5.38.3.596
http//[email protected] yarzawan
I realky love this app.I have fun by singing with this app😍